Wararka – Page 2 – Bandhiga
Deg Deg: Abyi Axmad oo amarkii ugu dambeeyay siiyay ciidamada Federalka
Raiisul wasaraha Itoobiya ayaa amarkii u danbeyey siiyey ciidamada federalka Ethiopia amarkii ugu dambeeyay. Wuxuu ku amray Ciidamada Federalka iney gudaha u galan casimada gobolka tigreyda oo ah magalo ay...
Madaxweynaha Jabbuuti Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu ka walaacsan yahay in Alshabaab ay awood ku yeelato Baarlamaanka soo socda ee Soomaaliya; “Doorashadii goleyaasha sharci dejinta ee Soomaaliya waxaa loo muddeeyey...
Sida ay sheegay Hay’adda Cuntada iyo Beeraha ugu qaybsan QM ee FAO, Gobollada Dhexe ee Somalia iyo Bariga Itoobiya ayaa haatan noqday halka uu ayuxu ku dhalo koronkorada, kuwaasoo dhib...
Xaflad uu magaalada Baydhabo ku qabanayay Ra’isul Wasaaraha xukuumadda Federalka Soomaaliya ayaa waxa uu kaga hadlay walaaca doorasho oo ay qabaan musharaxiinta madaxtinimo ee dalka. Waxa uu Ra’isul Wasaaraha sheegay...
Shirka Musharaxiinta oo galay maalintii 5-aad
Shirka midowga musharaxiinta ayaa maanta galay maalinkii Shanaad kaa oo ka socda magaalada Muqdisho, waxaana maalmihii ugu dambeeyay ku biirayay xubnaha kala duwan ee bulshada Shirka. Waxaa maanta lagu wadaa...
Lafta Gareen “Dadka Qaylinaya dib ha u fiiriyaan, waxay horay usoo sameeyeen
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo xalay hadal ka jeediyey munaasabad casho sharaf aheyd oo sagootin loogu sameynayey ra’iisul wasaare Rooble ayaa ka hadlay arrimaha doorashada iyo...
Maxey u sheegeen wakiilada Beesha Caaalamka musharaxiinta madaxtinimo ee dalka?
Wakiilada Beesha Caalamka ee wada hadalka qadka Zoom-ka xalay la yeeshay Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha ee mucaaradka ah ayaa sheegay inay walwal la qabaan, ayna kala hadlayaan Madaxweyne Farmaajo. Hadalkan waxaa...
Maxaa ka hor taagan Cali Guudlaawe inuu tago magaalada Baladweyne?
Waxaa aad la isula dhexmarayaa maalmahan in Madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe ay ku adkaatay inuu u safro magaalada Baladweyne ee xarunta gobalka Hiiraan. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed...
Somaliland oo aqoonsi ka raadineysa dalka Koofur Afrika
Wasiirka Horumarinta Maaliyada Somaliland Dr Sacad Cali Shire aya ku sugan magaalada Johannesburg oo uu kaga qayb galayo kulan ka dhacayo south-africa oo ey ka qeyb galaya siyaasiyiin miisaan culus...
Musharaxiinta ku shirsan magaalada Muqdisho oo xil u dhiibay Madaxweyne Sheekh Shariif
Shirka magaalada Muqdisho uga socday murashaxiinta u tartameysa xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta guddoomiye u doortay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shiikh Shariif. Shirka oo galay maalintii 4aad ayey murashaxiinta iska...